Waa maxay wax taaj oo kale duritaanka
wax taaj oo kale duro waa hab wax soo saarka taas oo fiican ee soo saara waxyaabaha isku mid ah iyo heer sare ah oo joogto ah in tiro badan oo ah.
Warshadaha wax taaj oo kale duray si degdeg ah u koraya iyo 2016, warshadaha wax taaj oo kale duray caalami ah ayaa lagu qiyaasay inuu ku kacayo USD 283,54 billion.
Polypropylene ahaa waxyaabaha ugu used cayriin xisaabiyenimo 36% baahida guud, raaceen by ABS leh 25% baahida 2016.
Asia Pacific ayaa heysatay dalabka caalamiga ah ee wax soo saarka la isku duro doorsoon iyo urursaday ayaa 37% baahida guud ee 2016-ka.
Daawooyin badan oo caadi ahaan loo isticmaalo nolol maalmeedka waxaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo habka cirbad wax taaj oo kale ah. wax taaj oo kale duro waa geedi socod wax soo saarka ugu fiican ee helitaanka alaabta oo tayo sare leh heerar aad u kharash-ool ah.
Faa'iidooyinka wax taaj oo kale duritaanka
warshadaha wax taaj oo kale duray waxaa aheyn sii kordhaya. wax taaj oo kale duray la sii kordheysa loo isticmaalo wax soo saarka ee wax soo saarka badan.
habka wax soo saarka waxay leedahay faa'iidooyin badan habab kale. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee la isticmaalayo wax taaj oo kale duro ee wax soo saarka warshadaha waa sida soo socota:
Wax taaj oo kale duro waa mid aad u hufan habka wax soo saarka. Geedi socodka si weyn iswada oo ay gacanta ku robotics iyo mashiinada taas oo la mid aad u fudud u xakameyn karaa oo maamula shaqaale ah.
habka wax soo saarka waa mid aad u noqnoqonaysa oo lagu kalsoonaan karo, taas oo loo isticmaali karaa si loo soo saaro tiro badan oo ah wax soo saarka, kuwaas oo isku mid ah iyo joogto ah.
Sababo la xiriira habka wax soo saarka aadka u joogto, waxaa inta badan ka sahlan waa in la hubiyo joogtaynta ee alaabta iyo magac. Wax taaj oo kale duro waxay bixisaa ku dhowaad ah baadi-free habka wax soo saarka.
Wax soo saarka ayaa la macmalay in waqti aad u yar. Jeer wax soo saarka gaar ah ay ku xiran tahay kakanaanta iyo diiniga ah design, laakiin celcelis ahaan 15-20 ilbiriqsi waa markii u dhexeeya wareegga kasta.
The tayada alaabooyinka waa faa'iido kale oo wax taaj oo kale duray. Badeecada soo saaray yihiin miisaanka yar oo raagaya.
Products soo saaray iyadoo la isticmaalayo wax taaj oo kale cirbad aan ku biiray ama welded, halkii ay ka samaysan yihiin hal caaryada ah. Tani waxay kordhisaa u saameyn-caabin ah oo xoog siligga ee badeecada.
Soo saarta oo isticmaalaya wax taaj oo kale duro waa mid aad u kharash-ool ah . Qaybta ugu weyn ee kharashka iyo khayraadka baabba'aan inta lagu guda jiro naqshadaynta wax soo saarka iyo naqshadaynta of wasakhahaasi soo saarka.
Marka ay wax soo saarka iyo wasakhahaasi ayaa loogu talagalay, habka wax soo saarka waa mid aad u dhakhso ah. Xaddi badan oo badeecada la soo saaray karaa waqti aad u yar oo isticmaalaya caaryada isla joogta ah.
Habka wax taaj oo kale duray ayaa isbedelay, waxaad fartaan Wannaagga la taaban karo muddo. Warshadaha ayaa noqonaya bey'ada friendlier oo waarta . The geeddi-soo-saarka ugu dambeeyay keeni caag duugga ah mid aad u yar inta lagu guda jiro soo saarka.
The mashiinada cusub ayaa sidoo kale tamar aad tahay ku ool ah oo ay isticmaalaan ugu yaraan 20-50% tamar ka yar ee mashiinada ka weyn.
Codsi Caam ah, waayo, wax taaj oo kale duritaanka
wax taaj oo kale duray loo isticmaalo soo saaridda alaabooyin kala duwan oo caadi ahaan loo isticmaalo noo by in nolol maalmeedkeena. badeecada soo saaray by wax taaj oo kale duro waa tayo aad u wanaagsan, oo joogto ah, iyo sare raagaya.
Qaar ka mid ah codsiyada ugu badan ee wax taaj oo kale duray oo laga wada hadli hoos ku qoran:
Qalabka Medical lagu sii kordhaysa soo saaray iyadoo la isticmaalayo habka cirbad wax taaj oo kale ah. Warshadaha wax soo saarka qalab caafimaad oo isticmaalaya wax taaj oo kale duray waxaa si tartiib ah u koraya ee 6% sanad kasta.
In 2012, in ka badan 755 million pounds oo ah caag la wada baabbi'iyey, waayo, soo saarta qalabka caafimaadka iyo qalabka la isticmaalayo wax taaj oo kale duray. Badeecada soo saaray waxaa ka mid ah tayada aad u sarreeya, sax ah, oo waxaad bixisaa qaab wanaagsanaaday.
wax soo saarka ayaa la macmalay in qiimaha aad u yar taas oo ka dhigaysa waxaa suurto gal ah in la tuuro iyaga ka mid ah ka dib markii la isticmaalayo oo ay ka fogaadaan iyaga dibna ka dib markii sugo jeermiska. Tani waxa ay yaraynaysaa halista ah ee waqtiga caabuqa iyo diyaarinta qalabka.
Wax taaj oo kale duray waxaa aad caadi ahaan loo isticmaalo for soo saarta qaybo ka mid baabuurta oo tayo sare leh. Waxaa lagu qiyaasaa in ku saabsan 90% ka mid ah qaybo ka mid ah loo adeegsaday baabuur ayaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo wax taaj oo kale duray.
habka wax taaj oo kale duray wuxuu ka caawiyaa soosaarka qaybo ka mid tayo sare leh oo aadka u sugan oo joogto ah oo waa mid aad muhiim u ah suuqa baabuurta hubinta ammaanka.
qaybo weliba kuwanuna waa khafiifa oo ka caawisaa in ay hagaajiso waxqabadka shidaalka. qaybo ka mid ah waa mid aad u xoog badan iyo cimri dheer oo hagaajinaysaa ammaanka guud ee rakaabka.
Daily Isticmaalka Products
Qaar badan oo ka mid ah waxyaabaha caadi ahaan loo isticmaalo isticmaalo nolol maalmeedkeena waxaa soo saaray iyadoo la isticmaalayo wax taaj oo kale duray. Products sida dhalooyinka caagga ah, weel caag, alaabta lagu ciyaaro, alaabta iwm ayaa la soo saaray by habka wax taaj oo kale duray.
badeecada soo saaray yihiin oo khafiifa, raagaya, iyo saamaynta u adkaysta oo ay hubisaa in ay socdeyba. Codsiga waxaa of taaj oo isku duro ee soo saarta waxyaabaha maalin walba loo isticmaalo waxaa si joogto ah kor.
Isticmaalo iyo Electronics
The isticmaalo iyo qalabka elektaroonikada ah loo isticmaalo si caadi ah ayaa sidoo kale si weyn loo soo saaray iyadoo la isticmaalayo technology wax taaj oo kale duray.
waxyaabaha Electronic iyo accessories sida taleefannada gacanta, accessories telefoonka gacanta sida qafiska, samaacado, daboolida kiniin, jirka camera, kontaroolada fog, qaybo elektaroonik ah, waayo, telefishinada iyo kombiyuutaro iwm waxaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo wax taaj oo kale duray.
Daawooyinka waxaa laga soo saaray karaa in badan la joogta sare wax taaj oo kale duray. Maaddaama ay dabacsanaan ay ku dooranayaan isku-dar ah bacyaal wax soo saarka, wax soo saarka, kuwaas oo ay adag yihiin oo raagaya.
Baako waa mid ka mid ah codsiyada ugu badan ee wax taaj oo kale duray. Baakadaha loo isticmaalo cuntada iyo agabka aan cuntada ahayn waxaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo wax taaj oo kale duray.
Baakadaha dhawraa badeecada ammaan ah oo magdhow lacag la'aan ah inta lagu guda jiro gaadiidka. In 2016, baakadaha ahaa codsiga keentay wax taaj oo kale duray baahida a total of 43.385 kilotons .
wax taaj oo kale duray helaa codsi ballaaran ee wax soo saarka ee alaabta la xiriira dhismaha iyo warshadaha hantida maguurtada ah.
Isticmaalka caag ah waxay leedahay faa'iidooyin badan sida xumbo qoryo iyo biraha waa. Waxa kale oo ay bixisaa faa'iido oo kala ah in dib loo cusboneysiin karo.
Qaar ka mid ah waxyaabaha inta badan loo isticmaalaa in industry dhismaha macmalay by wax taaj oo kale duro ka mid ah meelaha hawadu ka saqafka, gaskets cay, qaybood sharraxaa, daaqadaha iyo qaybaha albaabka iwm
Copyright 2020 © CBPMM Khariidadda bogga